Asset Dziviriro Services uye Kubvunza
Dzivirira zviwanikwa kubva pachikwereti chebhizimusi, makakatanwa evamwe mubhizinesi, kumatare edzimhosva, kutonga uye kunyangwe kurambana. Isu tinokubatsira kutanga bhizinesi, kukura bhizinesi rako uye kuchengetedza izvo zvakanyanya kukosha, hupfumi hwako hwaunounganidza kubva pakubudirira kwako.
Isu tinopa akasiyana siyana masevhisi ekudzivirira masevhisi uye mota dzinotanga neyakavanzika maturusi uye dzinoenda kusvika kune yakazara yakazara yekumahombekombe asset dziviriro yekuvimba zvirongwa. Kutanga kune chero hupfumi hurongwa hwekuchengetedza hupamhi hwekugadzira rakasarudzika repamutemo mubato wekudzivirira yako wega pfuma kubva pachisimba.
Makambani uye maAdvs ndiyo yakajairika fomu yekudzivirirwa kwemidziyo kubva kune bhizinesi chikwereti inodzivirira hupfumi hwemwene webhizimusi kubva kuzvikwereti uye mutoro webhizinesi - chifukidziro chekambani ndiyo yekutanga dura rekuchengetedzwa kwemidziyo kune varidzi vebhizinesi.
Kuvanzika kwemari uye kuvanzika kwevaridzi kunobatsira kudzikisa mikana yekutariswa mumatare asina basa. Isu tinopa zvakavanzika masevhisi kana tichigadzira bhizinesi idzva sechirongwa chegore negore uye matirastiki epasi anotendera varidzi vezvivakwa kuti vape zita rezvivakwa kuzita retrust. Kuvanzika kwevaridzi uye kudzivirirwa kuburikidza nemasangano emakambani kunogadzira yakasimba dura rekudzivirira.
Kune akatiwandei emhando dzekuvimba dzinochengetedza zvinhu kubva kumatare edzimhosva. Imba yakavharirwa mutrust yezvinangwa zvekuronga zvivakwa inodzivirirwa kubva kumatare edzimhosva kumunhu anowana rubatsiro.
Mitemo yakasimba kwazvo yekudzivirira nhumbi dzako inouya nenzira yekuzvigadzirisira kwekuvimba zviito. Anokosha ekuchengetedza matirastii trasti anonyatso gadzirirwa kuchengetedza zvinhu zvako kubva kuchisungo mune ramangwana apo munhu anogona kugadzikana uye kubatsirwa kubva kune ekuvimba zvinhu.
Aya maturusi ane hunyanzvi uye anowanikwa muDzimba dzeMudzimba neOfshore. Isu tiri nyanzvi pakusimbisa idzi dzinodzivirira mota nemidziyo yepamutemo kune yako wega kuchengetedzwa kwemidziyo.
Asset Dziviriro Trust
Imwe yedzakanakisa nzira dzekuzvidzivirira kubva kumatare edzimhosva ndeyokumisikidza asset kuchengetedzwa kuvimba. Nehurombo, matrust epamba haana marekodhi akanaka enzira. Offshore trasti, kune rimwe divi, iine mamwe akanakisa easset chengetedzo nyaya yemutemo nhoroondo. A Cook Islands kuvimba pamwe neNevis trust ine maviri akanakisa marekodhi enzira.
IRAs dzinowanzoregererwa kana kusunungurwa kubva kumatare. Zvisinei, kudzivirirwa kwavo kune zvishoma. Uyezve hapana zvishoma kudzivirirwa kweIRA kubva pakurambana kunze kwekunge iwe uchishandisa maturusi akakodzera emutemo. In IRA Kudzivirirwa Kwematare neHurumende, iwe uchaverenga maitiro ekudzivirira yako IRA kubva pakurambana kana kumatare edzimhosva.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Gumiguru 2, 2019